Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay dugsi quraan iyo masaajid ku burburay qarax ka dhacay Muqdisho - Halbeeg News
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay dugsi quraan iyo masaajid ku burburay qarax ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO(HALBEEG) Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa maanta dhagax dhigay masaajidkii iyo dugsi quraankii ku burburay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan Al shabaab ku qaaday xarunta degmada Howladaag ee gobolka Banaadir.
Eng.Yariisow ayaa sheegay in goobahan lagu dhisayo ololaha isxilqaan kaasoo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
“Goobahan aan dhagax dhignay waxaa lagu dhisi doonaa ololaha isxilqaan oo uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo, tani waxay muujineynsa inaysan hor istaagi karin Al shabaab hiigsiga iyo himilada shacabka Soomaaliyeed, waxaan tusaneynaa in masaajidka iyo dugsi quraanka si wadajir ah u dhisaneyno” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in Al shabaab ay doonayaan inay caasimadda dib u celiyaan, balse aysan marnaba dhici doono, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay difaacan dalkooda.
Marka laga soo tago burburka goobahan,inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxaa ku nafwayay lix ruux oo ay ku jiraan caruur dhiganeysay dugsi quraan ku dhawaa xarunta degmada Holwadaag.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo la kulmay maamulayaasha dugsiyada dowladda
Guddoomiyaha golaha shacabka oo la kulmay khuburo ka socotay UNDP